कुशल संगठक, जनपरिचालनमा अब्बल हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’ - Everest Dainik - News from Nepal
कुशल संगठक, जनपरिचालनमा अब्बल हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’
घोराही । मुलुकमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीको आह्वानमा देशव्यापी जनआन्दोलन शुरु भएको थियो ।
संकटकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासन भएकाले शुरु शुरुमा सडकमा मान्छेहरूको संख्या थोरैथोरै थियो । क्रमशः जन आन्दोलनमा जनताको उभार बढ्न थाल्यो । दाङको घोराहीमा पनि आन्दोलन दिनप्रतिदिन बढिरहेको थियो । अन्तिम दिनहरूमा त घोराहीका सडकमा डेढ लाख जनता उपस्थित भएका थिए ।
त्यतिबेला चर्चा चलेको थियो । यति धेरै मान्छे कहाँबाट आए ? यी मान्छेहरु को हुन् ? कसको नेतृत्वमा यति धेरै मान्छेहरू सडकमा आएका छन् ? भनेर धेरैले प्रश्न गर्ने गर्दथे ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मुल नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र विद्रोही शक्ति माओवादीको पहलकदमीमा जनआन्दोलन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको थियो । आन्दोलनमा अन्य सात राजनीतिक दल पनि थिए । सडकको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो भने जनता जुटाउने जिम्मा माओवादीले लिएको थियो ।
घोराहीको सडकमा डेढ लाख जना उतार्ने नेता थिए– हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’ । माओवादीका अन्य बरिष्ठ नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर समग्र जनपरिचालनको नेतृत्व शर्माले गरेका थिए । आन्दोलनको समयमा विशेष गरेर दाङमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नागरिक अगुवाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मा पनि माओवादीको तर्फबाट शर्माले नै पाएका थिए ।
दाङमा लोकतान्त्रिक र वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्ने आन्दोलनको दाङमा नेतृत्व गर्ने उनै हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’ अहिले प्रतिगमनविरुद्ध बनेको बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट मुलुककै ठूलो उपमहानगरपालिका घोराहीमा मेयरको साझा उम्मेदवार बनेका छन् ।
हिजो राजाको प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएको वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध एक ठाउँमा आएको छ । घोराहीमा सो प्रतिगमन विरुद्धको अगुवाइ गर्ने जिम्मा उनै शर्माले पाएका छन् । यसपटक पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका विभिन्न पदमा उठेका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउने गरी शर्माले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
‘मैले आफू मात्रै विजयी हुने भन्दा पनि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उपमेयरका उम्मेदवारसहित वडाहरूमा उम्मेदवार हुनुभएका सबै गठबन्धनका साथीहरूलाई विजयी गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको छु,’ शर्मा भन्छन्, ‘सबैलाई समेटेर लैजाने मेरो चरित्र हो, हामीले घोराहीबाट प्रतिगमनकारी शक्तिलाई हराउँदै समृद्ध उपमहानगरपालिका निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं ।’ गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रतिगमनविरुद्ध भएकाले सबै दलहरुले इमान्दारिता देखाउने कसम खाएको उनले बताए ।
यस्तो छ शर्माको राजनीतिक यात्रा
पार्टीभित्र वा बाहिर डायमण्ड उपनामले चिनिने हेमराज शर्मा अहिले गठबन्धनका तर्फबाट घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार रहेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका १५ वर्षसम्म राजकीय पदमा नरहेका डायमण्डले पार्टी जिम्मेवारीमा रहेर दाङका थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई राजकीय जिम्मेवारीमा पु¥याउन कुशल संगठकको भूमिका खेलेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा र जसपाको साझा उम्मेदवारको रुपमा रहेका डायमण्ड माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । गठबन्धनबाट देशभरका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये दाङको घोराही र बाराको जीतपुरसिमरा माओवादीको भागमा परेको थियो । सोही सहमतिअनुसार घोराही उपमहानगरमा हेमराज शर्मालाई जिल्ला पार्टीले सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो ।
घोराही–१५ निवासी हेमराज शर्माको जन्म दाङदेउखुरी हालको गढवा–३ धैरेनीमा २०३१ साउन ५ गते भएको थियो । बुबा डिल्लीराज शर्मा पोख्रेल र आमा कुन्तादेवी पोख्रेलको एक मात्र छोराको रुपमा रहेका ‘डायमण्ड’का दिदी–बहिनी भने ७ जना रहेका छन् ।
२०४३ सालमा गाउँको स्कूलमा कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा सहिद कृष्ण सेनले विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध गराएपछि राजनीतिको सुभारम्भ गरेका हेमराजले २०४७ सालमा एसएलसी पास गरेर घोराहीको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्न थालेपछि विद्यार्थी राजनीतिलाई पनि फराकिलो बनाउँदै लगे ।
घोराहीबाटै बीकमसम्मको अध्ययन सकाएर २०५३ सालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर होमिएका थिए । उनीसहित परिवारमा २ दिदी र २ बहिनी पनि जनयुद्धमा होमिएका थिए । जनयुद्धमा भूमिगत भएका दिदीहरुमध्ये दामा शर्माले युद्धकालमै जीवनसंगी यज्ञश्वर शर्मालाई गुमाउनु परेको थियो । उहाँ अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । माओवादी जनयुद्धको क्रममै जनवादी विवाह गरेका हेमराजको जीवनसाथी गंगा सेनसहित १ छोरा रहेका छन् ।
सानै उमेरदेखि मेहनती र तीक्ष्ण दिमागका हेमराज घरको निम्न आर्थिक अवस्था र वरिपरीको वातावरण कम्युनिष्टमय भएपछि उनी त्यस विचारबाट सानैदेखि प्रभावित देखिन्छन् ।
पूर्णकालीन रुपले पार्टीमा होमिएपछि उनले तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास गर्दै संगठनमा परिणाम ल्याउने गरी आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाएका थिए । शान्त, शालीन र खदिलो विचार प्रस्तुत गर्ने हेमराज मान्छेको मनोविज्ञानलाई छिटै बुझेर समस्याको समाधान तत्काल दिन सक्ने खुबी राख्छन् । जनयुद्धका बेला नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्रका रुपमा पार्टीका संगठन परिचालन गर्न सक्ने देशभरका अगुवा कार्यकर्तामा उनी औंलामा गनिने नाममा पदर्थे ।
युद्धकालीन समयमा कम उमेरमै पार्टी जिल्लाको सचिव पद सम्हाल्न पुगेका डायमण्ड उतिबेला बनेका जिल्ला जनसरकारका नीति, योजना र विकास कार्यक्रमको मास्टर प्लान बनाउने नेता हुन् । दाङका हरेक गाउँमा पुगेका युवा नेता डायमण्ड एक कुशल संगठक मात्र नभएर राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्छन् । त्यसको प्रमाणित उनले जनयुद्धकालदेखि शान्ति प्रकृयामा आउँदा दाङमा गरेका लाखौंको जनपरिचालन र त्यसको कुशल व्यवस्थापन गरेर देखाइसकेका छन् । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा दाङका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र माओवादीले हात पारेको थियो ।
पार्टी र आन्दोलनमा सर्मपणभावले लाग्ने डायमण्ड काममा परिणाम दिन सक्ने नेताको रुपमा परिचय बनाएका छन् । शो पीसमा देखिनेभन्दा बढी योजना बनाएर त्यसलाई सफल पार्ने काम रमाउन खोज्ने ‘डायमण्ड’ले परिपक्व युवा नेताको रुपमा आफ्नो परिचयलाई बलियो बनाएका छन् ।
सबैका विचारलाई सुन्ने धैर्यता राख्न सक्ने र सबै किसिमको मनोभावलाई बुझेर योजना बनाउन सक्ने, समन्वयकारी अनि व्यवहारिक पक्षमा जोड दिने नेतृत्वमा हुनुपर्ने विशिष्ट गुण उनमा रहेकाले नै पार्टीले उनीलाई गठबन्धनको साझा उम्मेदवारमा उभ्याएको देखिन्छ ।
संघर्षले खारिएका एक दरिलो, विश्वासिलो अनि योजना निर्माणमा मास्टर माइण्डको व्यक्तित्वमा रहेका डायमण्ड गठबन्धनको वजन पुग्ने बलियो उम्मेदवारको रुपमा उभिएका छन् । एमालेमा पुरानै नरुलालको अनुहार दोहरिने कुराले निरुत्साहित बनेका घोराही उपमहानगरवासी जनतामा ‘डायमण्ड’को भर्जिन अनुहार चुनावी मैदानमा उत्रिनुले नयाँ पुस्तामा समेत उत्साहको रौनक थपिदिएको छ ।